Kumanikidza Kusiya Zvikumbiro mu macOS Sierra | Ndinobva mac
Kumanikidza Kusiya Zvikumbiro mu macOS Sierra
Kunyangwe hazvo iyo komputa komputa sisitimu iri, yakanyatsogadzikana, panogona nguva dzose kuve nemamiriro ezvinhu anokonzeresa kuti irembere kana kuti imwe yeanokumbira yatiri kumhanya inomira kushanda.
Nezve izvi isu tinoda kujekesa kuti kazhinji yenguva, kana iyo system ye Mac inorembera kwete nekuti iyo system pachayo yarega kushanda, asi nekuti yechitatu-bato kunyorera ndiyo yanga iine kusashanda uye saka chishandiso chiri kuenderera mberi ndicho chinobondera uye hachibvumidze isu kuti tiite chero chinhu nekombuta kusvikira taibuda.
Kana izvi zvinhu zvikaitika izvo zvatinofanirwa kuita kumanikidza kubuda kwechikumbiro icho chiri kushanda zvisina kujairika uye ichi Apple pachayo chakaronga nzvimbo yatinogona kugadzirisa kuvhara nenzira iyoyo, ndiko kuti, KUMANIKIRA.
Kuti uite izvi, ingo enda kune iyo  menyu uye tinya pane kudonha kunoonekwa muKumanikidza kubuda ... iwe uchaona kuti pop-up hwindo rinovhura ichikuratidza iwo maapplication ari kushanda uye Ndeapi amira kupindura kuitira kuti iwe ugone kusarudza izvo zvaunofunga zvakakodzera uye uzvivhare.
Zvakanaka, muchinyorwa chino chatinoda kukuudza ndechekuti Apple software mainjiniya vanogara vachienda kumberi uye nezveichi chiito pane imwe nzira yakavanzwa yatino chengetedza iyo pop-up hwindo iyo yekutsvaga iyo application iyo yamira kushanda kuti ive kukwanisa kuzviita.kuvhara.
Kana usati wadzvanya mune iyo  menyu, tinya iyo SHIFT kiyi, tichaona kuti mu  menyu pane kuratidza Simba kubuda ..., chinoonekwa is Force kubuda kwechishandiso chiri kumberi. Kana izvo zvawavhura iShoko uye zvamira kushanda, kana iwe ukaita izvo zvandakaratidza, izvo iwe zvauchaona mukudonhedza pasi ndiko Kumanikidza Shoko kubuda.
Iyo ingori imwe nzira yekumanikidza maapplication kuti abude, asi mune izvi uchifunga kuti iyo yauri kuzomanikidza kuvhara ndiyo application iri kumberi kwekushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Sierra » Kumanikidza Kusiya Zvikumbiro mu macOS Sierra
Jony Ive anoda kugadzira sipo yekuparadzira
Dzivirira yako nyowani 2017 MacBook Pro neiyi yekudzivirira ruoko